အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကချင်ပြည်နယ် လက်ဆောင်
38 Responses to “ကချင်ပြည်နယ် လက်ဆောင်”
ဖယ်ဖယ်ရွက် ကိုဒီမှာ ဗီယက်နမ်ကသူငယ်ချင်းစိုက်ထားပြီး ပေးပါတယ်။
ဘယ်လိုခေါ်မှန်းမသိတာ အခုတော့သိရလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မျှစ်ချဉ်နဲ့ ဟင်းပြင်းရွက် လှော်ကို မြည်းကြည့်ချင်ပါတယ်။
အင်းတော်ကြီးငါးချဉ်ကတော့ ကျနော့် ဖေးဘရိတ်ပါဘဲ။ စားပြီးရင်း စားချင်ပေါ့။ ကချင်ပြည်နတယ် အစားအစာတွေ မစိမ်းပေမဲ့ ကျောက်ဂျင်းဆိုတာကို အခုထိ မကြားဖူးသေးပါဘူး။
ကံဇင်းအနံ့ကိုလဲ အခုထက်ထိ ဓါတ်မတည့်သေးဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လက်ဆောင်တွေ အများကြီးမို့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
ပိန်းဥ မျှစ် ကျောက်ဖရုံသီး တည်သီး အဲဒါကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အသီးအရွက်က ပထမဆုံးကြားဖူး မြင်ဖူးတာ မမရေ... တည်သီးကလည်း ဒီရောက်မှ စားဖူးတာ။ အောက်ပြည်က အစားအသောက်တွေနဲ့ တော်တော်ကွာတယ်နော်... အင်းတော်ကြီးဘုရားကိုတော့ တခါလောက်ဖူးချင်တယ် မမရေ...
ပိန်းဥ၊ မျှစ်တို့ခြောက်၊ ကျောက်ဖရုံသီး၊ ငါးချဉ် တို့ပဲ သိတယ်၊
ငါးချဉ်ကြော်လေးစားချင်စရာ ချက်ထားတာ၊ ငရုတ်သီးထောင်းလေးနဲ့ စားလိုက်ရရင်တော့၊
ဟင်းပြင်းဖူးလည်း စားလို့ကောင်းမယ့်ပုံလေ၊ ဆိမ့်ဆိမ့်လေးတဲ့ စားကြည့်ချင်တယ်၊
မချော အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ။
ဒါပေမယ့် အပြင်အဆင်လေး မြင်ရတာနဲ့တင်
ခိုးစားခဲ့ရတဲ့ အချိ်န်လေးတွေ သတိရသွားတယ်
အစ်မချော... ခရီးက ပြန်ရောက်ပြီလား။ သတိရနေတာ။ ရို့စ် တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး မစားဖူးတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ထွက် အစားအစာလေးတွေ လာငေးပြီး ဗပာုသုတ ရသွားလို့ ကျေးဇူး။ မြည်းကြည့်ချင်လိုက်တာ။
သွားရည် ကျ လိုက်တာဗျာ.. .ဟင်းဟင်း ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခေါက်သွားလို့ ဗိုက်ကားအောင် စားလိုက်ချင်စမ်းပါရဲ့။
တောက် ....တောက် တောက် (သွားရည်ကျသံ) ရှလွတ် ရှလွတ် ပလွတ် ပလပ်။ (စားနေစဉ် သကာလ)
သွေးတိုးရှိလို့ ဆေးပုလင်းလေး ယူသွားတယ်ဗျး) ကျေးဇူး ပျော်ခဲ့တယ်ဟုတ် ကိုယ်လည်းလွမ်းပါ့ မွေးရပ်မြေကို ..။
ဟင်းပြင်းသီးနဲ့ အရွက် မစားရတာ
၁၃နှစ်ရှိပြီ :( အကုန်ကြိုက်တယ်
ပျော်လိုက်တာ။ အိမ်သားတယောက်ယောက်ခရီးကပြန်လာတော့ပါလာတာတွေအိတ်ဖွင့်ပြီးကြည့်ရသလိုဘဲ။ အားလုံးကုိုတကယ်ဘဲစားချင်တယ်။ ဒေသစာတွေကို စမ်းစားရတာသိပ်သဘောကျတယ်။ (ဘိုစာကိုမဆုိုလိုပါး)။)
မြှစ်ချဉ်နဲ့ ငါးချဉ်စားချင်တယ် မချောရေ...
အစာအိမ်က နာနေတုန်းမို့ ဆံပြုတ်ပဲ စားနေရတယ်..ဟင့်
ကွန်နက်ရှင်ကျနေလို့ အပေါ်ဆုံးက စိမ်းစိမ်းတစ်ထုပ်ပဲ မြင်ရသေးတယ်...စားစရာနံမည်တွေ ထူးဆန်းနေလို့ နောက်နေ့မှ မကျေပွဲလာကြည့်ဦးမယ်...ကျောက်စိမ်းလေးဘာလေးများ ၀ယ်ခဲ့မလားအောက်မေ့တယ်...ဒါတွေအကုန်သာ စားရရင် ပေါင်ချိန်တော့ တက်တော့မှာပဲ...
ကြိုက်တာတွေ တစ်ခုချင်းဆီကို မြင်လိုက်ရသလိုပါပဲနော်...။
Very interesting.I like to try each and every dish:P
ဒေသထွက် အစားအစာတွေကို လာလေ့လာပါတယ် အမရေ ဒီဘက်မှာတော့ အဲဒါတွေမတွေ့ဘူးသလောက်ပဲ. . .
ကံဇင်း၊ ဟင်းပြင်း နဲ့ ကျောက်ဂျင်း မစားဖုးဘူး။
တရုတ်ဆေးမြစ်တွေထဲမှာ ဟင်းပြင်းဖူးလို ပုံစံတွေ တွေ့ တယ် လာဗင်းဒါပွင့်Lavendarလို့ ထင်နေတာ
စားစရာတွေ အဆန်းတွေဘဲ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးများ ပေးမလားဆိုပြီး လာတန်းစီတာ အစားသောက်ပွဲနဲ့ တိုးပြီး ဗိုက်ကားပြန်သွားပြီ
မကြားဘူးတဲ့ အသီးအရွက်တွေများတယ် ညီမ ချက်ကျွေးတော့လည်း စားမှာပေါ့
အင်းတော်ကြီး က ငါးကြီးချဉ် ကိုတော့ အရမ်းကြိုက်တယ် အိမ်မှာလည်း အမြဲကျော်စားတယ်
တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး နှိပ်စက်တော့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောလား.. ဟင်။
ဟင်းပြင်းတဲ့ တစ်ခါမှ မကြားဖူးသေးဘူး။ ပိန်းဥဟင်းတော့ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ဟိုနေ့ က ဈေးသွားရင်း တွေ့ လို့ကီလိုဝက်ဝယ်ထားတယ် ချက်ဖို့ပျင်းရင် ပြုတ်စားမယ်.. :P
နောက်ငါးချဉ်လေးလဲ စားချင်သေးတယ်... :(
ဟင်းပြင်းဖူးက အသီးလေးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါလဲ အဲဒီအသီးတွေကိုကြော်စားကြသေးတယ်.. ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ့ကို ဟင်းပြင်းသီးကြော်ခိုင်းပြီး ဒီတိုင်းစားခဲ့၇တာကို သတိ၇တယ်။ အမရဲ့လက်ဆောင်တွေက အိမ်ဟင်းတွေနဲ့ တစ်ထေ၇ာတည်းမို့လို့ အိမ်ဟင်းကိုလွမ်းလိုက်တာ... ကျွန်တော်မြစ်ကြီးနားပြန်တုန်းက အဲဒီဟင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်မစားခဲ့၇ဘူး။။ နောက်တခါပြန်၇င်အဲဒါတွေ အဝစားပစ်မယ်။ ပန်းဥထောင်းအကြောင်းလေးလဲ ကြုံ၇င်ေ၇းပေးပါဦး။ ဟင်းအကြောင်းေ၇း၇င်းနဲ့ သွားေ၇ကျလာပြီ.. ၇ှလွတ်.. :P
မြန်မာပြည်ကခြံထဲမှာလည်း သရက်တို့ ကတက်တို့ ခူးလိုက်စားလိုက်နဲ့ သိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းတာမရဲ့
:D.. အတော်ကို စနစ်တကျနဲ့ နှိပ်စက်တာပဲ.. ဟဲဟဲ... သွားရည်တွေ တမြားမြားနဲ့...း))))
မစားဖူးသေးတာတွေအများကြီးပါလား စားချင်လိုက်တာ :P
မိုးညှင်း ပူတာအို နေဘူးသူ.
တယ်သီးရယ်၊မျှစ်တို့ခြောက်ရယ်၊ ဟင်းပြင်းဖူးရယ်၊ကဇင်းရွက်တွေကိုအခုလိုလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့တစ်မျိုး ဟင်းချက်ပြီးသားတစ်ဖုံ စုံနေအောင်တွေ့ရတာ အရမ်းကိုသတိရလာမိတယ်။
တစ်ခါမှမစားဘူးတဲ့ ဟင်းတွေနဲ့ စားချင်စရာကောင်းမယ့် ဟင်းတွေပဲ မချောရေ ... တစ်ခါလောက် တစ်ကယ်ချက်ကျွေးဦးနော်
ဂလု..ဂလု.... ဟော...ဂွီပြန်ပြီ.... ရွှတ်....
ဟင်းပြင်းဖူး စားကြည့်ချင်တယ် မစားဖူးဘူး၊ စုံနေတာပါပဲ အင်းတော်ကြီးငါးချဉ်သုပ်စားဘူးပါသည်၊ ကောင်းပါသည်။
အားလုံးစားချင်တယ်..ကျောက်ဂျင်းတွေ့တော့ ပန်းဥထောင်းကိုပါ ပိုသတိရသွားတယ်..ဒီမှာ ဖက်ဖယ်ကလွဲရင်ကျုန်တာ ရှိဘူးလေ..
i miss kyat gyin from sein lone kabar...
can you please tell me how vietnamese call phat phae leaves?
ချက်ကျွေးထားတဲ့ ဟင်းလေးတွေကိုပဲ သွားရေကျပြီး ပြန်သွားခဲ့ရတယ်.။ တကယ်စားဖို့ ဘယ်တော့များမှ အခွင့်ရမှာပါလိမ့် မချောရယ်..။
မချောရေ အိမ်ကိုလွမ်းသမျှ ဒီဆိုက်ကို ဝင်ကြည့်တာနဲ့ အတော်အလွမ်းပြေသွားတယ်၊၊ ဖားကန့်တောင် အတော်လေးပြောင်းလဲနေပြီပဲ၊၊ ဟင်းပြင်းရွက်ကို စားချင်တာတော့ မပြောပါနဲ့တော့၊၊ လိုင်ဇာလမ်းပေါ်က မြေပဲယို ဆိုတဲ့နာမည်လေးက ခုထိသုံးနေတုန်းဆိုတာ သိရလို့ပြုံးမိသေးတယ်၊၊ ကျေးဇူးကမ္ဘာ၊၊ဒီထက်စာတွေ ပိုရေးနိူင်ပါစေ၊၊
i never try yet Kachin food :(
i wanna try all of above, if i'veachance
မရေ....ဇာတိမြေကို မပြန်ဖြစ်တာ ဆယ်နှစ်ကျော်ကြာလာတာ တကြောင်း...အသက်တွေတဖြေးဖြေးရလာတော့ ဇာတိမြေကို အလည်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်တွေက တနေ့တခြား ဖိစီးလာတယ် မရေ...အဲဒီလို အချိန်မှာ ဒေသထွက် စားစရာတွေကို အခုလို အများကြီးတွေ့လိုက်ရတော့....:-(
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မရေ....ဟင်းပြင်းဖူးပေါင်း၊မျှစ်တို့ခြောက်၊ငါးချဉ်ကြော်၊ကဇင်းရွက်၊ပြီးတော့ မုန်ညှင်းဖူးပေါင်း မုန်ညှင်းအချဉ်ရည်.....အရမ်းသတိရတာပဲ မရေ.....
ဇာတိမြေက ထွက်ခွာခဲ့တာ အနှစ်၂၀ကျော်ခဲ့ပြီ.. ဒါတွေမြင်တော့ ချက်ချင်းပြန်သွားပြီး ချက်စားချင်လိုက်တာ. ၁၃နှစ်သမီးကတည်းက ထွက်လာတာဆိုတော့ ကျောက်ချင်းကိုတောင်မသိလိုက်ဘူး. အခုမှကြားဖူးတယ်..
အမ ရေ ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျတယျ .မှေးရပျမွေ ကခငျြပွညျနယျနဲ့ဝေးနတော ၁၀ နှဈရောကျပွီ.အဲဒီ ကြောကျဂငျြး တှေ ဟငျးပငျးသီး/ရှကျ တှအေရမျးစားခငျြတယျ.လှမျးလိုကျတာ.Thanks